EndeavorOS 2021-02-03, yekutanga vhezheni ye2021 inosvika neLinux 5.10 | Linux Vakapindwa muropa
EndeavorOS 2021-02-03, yekutanga vhezheni ya2021 inosvika mushure memwedzi yakati wandei isina nhau, asi neLinux 5.10
Pashure kusvitsa gore rimwe chete, kusimudzira kwesisitimu yekushandisa yakatevera Antergos kwakamira. Mwedzi yakapfuura pasina ISO nyowani ichiburitswa, izvo zvisina kunyanya kukuvadza kune vashandisi varipo, asi zvishoma zvakanaka kune avo vanoda kuisa yakachena kuisa. Maawa mashoma apfuura, chirongwa akaita official kuvhurwa kwe EdzaOS 2021-02-03, ndeipi yekutanga vhezheni yegore rino
Pese patinotaura nezve ISO nyowani kana vhezheni itsva yeanoshanda system tinofanirwa kutaura nezve kernel inosanganisira. EdzaOS 2021-02-03 usa Linux 5.10 nekusarudzika, inova yazvino vhezheni yeLTS yekernel. Iyo zvakare inosanganisira yakagadziridzwa mapakeji, uye pazasi iwe une runyorwa rweakakosha nhau dzakasvika pamwe chete naFebruary mufananidzo we EndeavorOS.
1 Pfungwa dzeKuyedzaOS 2021-02-03
1.1 Mabasa matsva
Pfungwa dzeKuyedzaOS 2021-02-03
Linux 5.10.11.arch1-1. Pakati pemwedzi uno, Linux 5.11 ichave iripo.
Firefox 85.0-1, yazvino vhezheni yewebhusaiti yeMozilla.
Rarama nharaunda uye kuisirwa kunze kwekumisikidza zvakagadziridzwa ku Xfce 4.16, yazvino vhezheni yeprojekti isingaremi graphical nharaunda.
Reflector-auto yabviswa sezvo Reflector ine chinhu ichi chakasanganiswa nekutadza.
Iyo yekugamuchira app ikozvino inotsigira yeBrazil-Portuguese.
Alacrity yakawedzerwa seimwe yetemu inowirirana neyekushandisa zvikumbiro.
Iwe unogona ikozvino sarudza iyo yekumisikidza chinja faira mukuwedzera kune yechinyakare swap partition kana uchisarudza otomatiki partition scheme.
Reflector-bash-yakazara yawedzerwa kuti zviite nyore kushandisa Reflector.
Kana kuiswa kwepamhepo kusarudzwa, magirazi anozo gadziridza otomatiki kumisikidza uye kudzikisira mukana wekugadzwa kwakatadza kunokonzerwa nemagirazi asingateereri.
Vakawedzera girazi ravo nyowani muIndia kusimudzira ruzivo rwevashandisi veIndia.
Panguva yekumisikidza mushandisi zvino anowedzerwa kune sys rfkill vhiri revashandisi boka nekutadza, ivo vakabvisa mamwe emapoka enhaka aikonzera nyaya nevatyairi nemikombe.
Rongedza uye wedzera akaiswa mapakeji ekuvandudza faira sisitimu inoenderana munzvimbo dzeGTK neQT.
Mapakeji eGVFS anongoiswa chete kana nharaunda dzeGTK dzasarudzwa.
Mamiriro ezvinhu eQT izvozvi ane kio-fuse, kio-gdrive, uye audiocd-kio yakaiswa nekusarudzika.
DM marongero chete eDM'S akaiswa (SDDM uye Lightdm), ese ari maviri asati aiswa nekutadza.
Sarudzo nyowani muWatch-pkglist = URL yekuwedzera mamwe mapakeji panguva yekumisikidza uchishandisa mushandisi_pkglist.txt faira iro rinogona kuwanikwa mu user_pkglist.txt mune iyo liveusers imba faira. Iwe unogona kugadzirisa izvi kuisa mamwe mapakeji.
Dingindira nyowani nekugadziriswa kweI3.
Kugonesa kusimudzira uye kusimbisa hushoma huzivi, ivo ikozvino vanotakura chete nyowani yepasi rose Wallpaper yeese DE neWM, inoitwa pane ese x86-64 uye ARM.
Gamuchira izvozvi ngarava neCacdiff kuti uone kushandurwa kwefaira shanduko mushure mekusimudzira uye inokutendera iwe kunyora, kutumira, kana kuona mitsara.
Kuwedzera faira regiyo kuforamu kana paine dambudziko, eos-log-chishandiso ikozvino inosanganisira / etc / fstab uye / boot / grub / grub.cfg.
eos-kugadzirisa-notifier ikozvino inogona kugadziridzwa nyore kuburikidza neyakagamuchirwa app.
KwidziridzoInTerminal, nharaunda yakakumbirwa chishandiso chekutarisa uye kugadzirisa iyo system kana eos-yekuvandudza-notifi yakaremara.
eos-sendlog inogona kutumira chero chinyorwa faira (kubva pane zvakajairwa) kuInternet kuti vamwe vaone. (inosanganisirwa mueos-bash-yakagovaniswa).
eos-pkginfo yakagadzirirwa kuwana rumwe ruzivo nezve pasuru, kazhinji ruzivo rwekushandisa uye / kana kodhi kodhi (inosanganisirwa mu eos-bash-yakagovaniswa).
EdzaOS 2021-02-03 yave kuwanikwa kurodha pasi kubva Iyi link. Sezvo iri sisitimu yekushandisa ine Rolling Release modhi yekuvandudza, zvese zvakagadziridzwa zvinotsanangurwa muchinyorwa chino zvatosvika kune vashandisi varipo, kusanganisira yazvino vhezheni yeFirefox, Mesa uye Calamares. Isu tinorangarira kuti iyo mifanikiso mitsva ndeye chete yekuisa zero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » EndeavorOS 2021-02-03, yekutanga vhezheni ya2021 inosvika mushure memwedzi yakati wandei isina nhau, asi neLinux 5.10
Ivo vanofanirwa kunetseka nezvekupedzisa iyo inogadza zvakanaka. Sezvo ini ndaisatombo gadza kana antegos kana iyi, yakandipa yekumisikidza kukanganisa uye ndakayedza kanoverengeka uye handina kumbokwanisa.
Sezvo Antergos akafa, ndakadzokera kumidzi yangu (Debian) chokwadi ndechekuti ini handina kuvimba neKushanda zvakanyanya, asi ndakafunga kuiisa mwedzi mishoma yapfuura uye ndinofanira kubvuma kuti ndiri kufara kwazvo, asi ndiko kana kuisa Lxqt kubva pamutsetse nekuti Xfce hachisi chinhu changu.
NSA inopa kurumbidza pamakambani anotora yakavharidzirwa DNS